आयात कर व्याख्या
हामी सम्पूर्ण प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्छौं, तर यदि तपाइँ युनाइटेड किंगडममा तपाइँको गाडी दर्ता हुँदा के कर तिर्न सक्छ भन्ने बारे थप पढ्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि पढ्नुहोस्।
के तपाईको कार EU मा छ? यदि तपाईं ईयू भित्रबाट बेलायतमा दोस्रो सेकेन्डको गाडी ल्याउदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले भ्याट् भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जबसम्म तपाईं यूआरडीमा टोर योजना अन्तर्गत गाडी ल्याउनुहुन्न। तपाईंले कुनै शुल्कहरू तिर्नु पर्दैन, र सवारी साधनहरूको लागि, तीस बर्ष भन्दा बढी भ्याट तत्व reduced% मा कम गरिएको छ। ब्रेक्सिट अघि, त्यहाँ सामानको स्वतन्त्र आवतजावत थियो, तर यो लागू हुँदैन किनभने युनाइटेड किंगडमले अब जनवरी २०२१ मा युरोपेली संघ छोडेको छ। यसको मतलब कुनै पनि आउने सवारी साधनहरू कर कानूनको अधीनमा छन् जसले EU बाहेक। यदि तपाईं युकेमा सर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो गाडी आफूसँगै ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले कुनै आयात शुल्क वा VAT तिर्नु पर्दैन। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न भने तपाइँ ToR राहतको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने उद्धरण प्राप्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र हामी तपाइँलाई थप जानकारी प्रदान गर्नेछौं। ब्रेक्सिटको बारेमा के हुन्छ? के हो टीओआर योजना ?
तपाईलाई अरू के थाहा छ? यदि तपाईले युरोपेली संघ (EU) बाहिरबाट कुनै गाडी आयात गर्नुभयो जुन EU बाहिर पनि बनाइएको हो भने तपाईले 10% आयात शुल्क र 20% VAT तिर्नुपर्नेछ। यो तपाईले आयात गरिरहनुभएको देशमा तपाईले गाडी किन्नु भएको रकममा गणना गरिन्छ।
यदि तपाईले EU बाहिरबाट गाडी आयात गर्नुहुन्छ जुन मूल रूपमा EU मा बनाइएको थियो उदाहरणका लागि स्टटगार्ट, जर्मनीमा निर्मित पोर्श 911। तपाईंले यूके भन्सारबाट रिलिज गर्नको लागि £ 50 र त्यसपछि 20% VAT शुल्कको घटेको फ्लैट दर तिर्नु पर्छ।
यदि गाडी क्लासिक हो भने, तपाईंले कुनै पनि कर तिर्न नपर्ने सम्भावना छ। तर कृपया एउटा उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंलाई तपाईंको विशेष गाडीको सही विचार दिन सक्छौं।